Gisary | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Nahoana ny gisa dia marary: lisitr'ireo aretina sy fomba fitsaboana azy ireo
Ny aretina gaza dia olana tena sarotra ho an'ny tantsaha. Ny aretina samihafa dia misy fiantraikany ratsy eo amin'ny isan'ny gisadia ao amin'ny andian'omby, ary koa mahatonga ny fahasimban'ny fitaovana sy ny aesthetic. Fantatry ny tantsaha rehetra mahay fa tsara kokoa ny misoroka ny aretina toy ny manonitra ny fahavoazana ho vokatr'izany. Raha ampitahaina amin'ny zava-manan'aina hafa, ny gisoa dia mora azo amin'ny aretina isan-karazany.
Ny aretim-bavony: aretina mifoka sy tsy misy fitsaboana
Tahaka ny biby rehetra, ny sakafon'ny vorona dia mety koa amin'ny aretina sy viriosy. Ny aretin'ny gaza dia iray amin'ireo olana goavana entin'ny mpanatrika. Misy fiantraikany ratsy eo amin'ny toeran'ny vorona ny fiantraikany amin'ny isan'ny omby. Koa satria ireo vorona ireo dia tena mora voan'ny viriosy, zava-dehibe ny mahafantatra izay aretina atrehiny, inona ny famantarana ataon'izy ireo ary inona no fitsaboana ilainy.
Ahoana no fomba fitondran'ny gaza ny diarrhea?
Any amin'ny toeram-pambolena maro tsy miankina dia miteraka gisa. Tokony ho fantatrao fa io vorona io dia tena mora voan'ny aretina isan-karazany amin'ny fikarakarana tsy mety. Hevero ny iray amin'ireo fomba mahazatra indrindra - ny aretim-pivalanana, izay mitaky ny fifantohan-tsain'ny olona, ​​satria matetika no famantarana ny aretina mafy. Nahoana no gripa gisa gisa, toy ny zavamananaina rehetra, mila fikarakarana sy fikojakojana fialana.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Gisary